Edito Taratra Archive | NewsMada | Page 4
Manantena fa tsy manahy tena…
Par Taratra sur 21/01/2019 Edito Taratra, NS Malagasy
Niavaka, nanetriketrika, be vahiny… Izay ny nanaovan’ny filoha vaovao ny Repoblika fianianana tamin’ity, raha ampitahaina ny tamin’izay natao dimy taona lasa fotsiny, ohatra. Nahoana? Manana fanantenana ny vahoaka, mavitrika, faly… Hafa ihany ny tena safidin’ny tena, na toy inona mety ho fanatsatsoana: latsaky ny 50% ny tahan’ny mpifidy tamin’ny fandatsaham-bato. Na ahoana na ahoana, tsy […]
Par Taratra sur 19/01/2019 Edito Taratra, NS Malagasy
Mihazakazaka ny toe-draharaham-pirenena amin’izao fametrahana amin’ny toerany ny filohan’ny Repoblika vaovao izao. Hijoro ny governemanta vaovao, hirosoana ny fandaharanasa vaovao, ny fomba fiasa vaovao… Handeha amin’ny fanavaozana tanteraka ny raharaha? Na fiovana sy fanovana… Arahaba soa, arahaba tsara. Mby ao an-tsaina amin’izao toe-draharaham-pirenena izao ny hoe: hazakazaka arahin-tosika. Saika famotrahana na faminganana mandrakariva no tsaroana […]
Izao vao tena handroso i Madagasikara
Par Taratra sur 18/01/2019 Edito Taratra, NS Malagasy
Tena fandrosoana hita maso sy azo tsapain-tanana no hiainan’ny Malagasy manomboka eto. Raha ny voarakitra ao amin’ny IEM izay vinan’asan’ny filoha amin’izao fotoana, zavatra tsy mbola fahitan’ny Malagasy no ho azony ato ho ato. Anisan’izany ny tanàna voavoatra antsoina hoe Tanamasoandro. Hamirapiratra sy ho modely izany na amin’ny fotodrafitrasa na amin’ny fahadiovana eny hatramin’ny firindran’ny […]
Par Taratra sur 17/01/2019 Edito Taratra, NS Malagasy
Tsy mbola vita ny fifidianana! Vao ny fifidianana filoham-pirenena iny vita iny. Efa zava-dehibe ny fahavitany, saingy misy ary maro ny lesoka tsapa. Efa Niaiky ny Ceni amin’ny tsy fahatomombanana teo amin’ny fanomanana sy ny fanatanterahana ny fifidianana. Manome fotoana rahateo izy ireo ny 24 janoary izao, hanambarany ampahibemaso ireny lesoka ireny. Mety hisy hisafoaka […]
Tsy maintsy miasa
Par Taratra sur 16/01/2019 Edito Taratra, NS Malagasy
Misy manantena mana avy any an-danitra angamba ny sasany. Tsy fantany sa mody tsy tsapany fa “ny hatsembohanao no ihinananao”. Na ny mana avy any an-danitra nalatsak’Andriamanitra ho an’ny zanak’Israely aza, mbola tsy maintsy vao maraimbe ny fakana azy, manamarina ilay fitenana malagasy hoe: “tsy miaraka ny fandria-mafana sy ny valala manatody”. Izany hoe, arakaraka […]
Par Taratra sur 15/01/2019 Edito Taratra, NS Malagasy
Vaovao ny taona, vaovao ny Filoham-pirenena, ho vaovao ny governemanta… Miandrandra zava-baovao amin’ny lafiny rehetra ny Malagasy. Raha ny eo amin’ny fandriampahalemana fotsiny no horesahina, tena miandry mafy fomba fiasa vaovao, fepetra vaovao ny rehetra. Ekena fa vao manomboka ny taona, maro ny trangana tsy fandriampahalemana miseho na eto an-dRenivohitra na any ambanivohitra, na any […]
Par Taratra sur 14/01/2019 Edito Taratra, NS Malagasy
Arahaba soa, arahaba tsara… Ranolava ny fiarahabana ny filohan’ny Repoblika vaovao: avy any ivelany, indrindra ny avy eto an-toerana. Amin’izany, samy mitanisaisa fiaraha-miasa, mamisavisa izay tokony hatao miaraka. Tsy misy maharatsy izany. Aiza ho aiza amin’izany ireo hoe mpanohitra? Indrindra ireo namisavisa ny mety hisian’ny korontana, adilahy politika… Ny hamisavisana ny ratsy mba hiavian’ny soa? […]
Par Taratra sur 12/01/2019 Edito Taratra, NS Malagasy
Ahoana koa ny manaraka? Ny tohin’ny toe-draharaham-pirenena io. Antenaina hisy amin’izay ny fitoniana sy ny filaminana maharitra. Mba hiatrehana amin’izay ny tena fanarenam-pirenena sy fampandrosoana. Nilaza rahateo ny filoha vaovao ny Repoblika fa hiasa mafy hisian’ny fampandrosoana isan-tokantrano manerana an’i Madagasikara. Ho araka ny tena hetahetam-bahoaka any ifotony amin’izay ny atao sy ny imasoana? Maika […]